Fujitsu Hard Drive Recovery Tutorial - Sida loo soo celiyo files lumay ka Fujitsu Ha
Sida loo soo ceshano Khasaaray Xogta laga Fujitsu Hard Drive
In kastoo aan sida caanka ah sida Sony iyo Toshiba, Fujitsu sidoo kale waa laptop muhiim ah oo soo saare drive adag dunida oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, Fujitsu laptop iyo drive adag users laga yaabaa in sidoo kale la kulmi arrinta khasaaro xogta. Ka soo qaad sawiro aad u qiimo badan ama videos lagu qalad ah la tirtiro ama formatted ka drive Fujitsu adag, waxaad noqon doontaa mid aad u badan ka careysan? Haddii aad weydiisanaya Fujitsu software kabashada drive adag, halkan waa meel sax ah.
Waxaan marka hore la aqoonsado qaar ka mid ah oo ku saabsan khasaaraha xogta idin tusin doonaa. Sida caadiga ah ee files lumay ayaa weli ku jira aad drive Fujitsu adag, in kastoo aadan arki karin ama iyaga mar dambe u helaan. Waxa suuragal ah in si joogto ah laga badiyay overwritten doona faylasha cusub. , Sidaas inuu ka soo kabsado Fujitsu drive adag xogta, waxaad u baahan tahay marka hore joojiyaan isticmaalka aad drive Fujitsu adag. Markaas waxaad u iman kartaa inaad internetka si ay u eegaan Fujitsu drive adag utility ah soo kabashada xogta.
Wax kasta oo sababaha keeni khasaaro xogta, Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican si aad u soo kabsado xogta ka Fujitsu drive adag. Ayaad ugu soo ceshano karaa noocyo kala duwan oo xog tirtiray, formatted ama xitaa ku kharribeen sida sawirada, document files iyo videos ka drive Fujitsu adag. Qalab la yaab leh bixisaa versions labada Windows iyo Mac aad.
Si aad u hubiso in aad files lumay la kama uusan soo kabsan karo ama, aad haatan soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery in baarista drive Fujitsu adag. Iyadoo ku xiran natiijada iskaanka, waxaad go'aansan kartaa inaad iibsato nooca buuxda u soo kabashada ama aan.
Qabtaan Fujitsu Hard Drive Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inuu ka soo kabsado Xogta laga Fujitsu Hard Drive
Baad tegaysaa in ay doortaan hab kabashada ah si ay u bilaabaan dib u soo kabashada kadib barnaamijka. Laga soo bilaabo image hoose, waxaad arki kartaa in aad waxaa la siiyaa 3 hababka soo kabashada. Si aad u hanato xogta lumay, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode hore.
Tallaabada 2 baarista Fujitsu Hard Drive in la ogaado Khasaaray Files
Markaas waxaad dooran kartaa warqad drive aad drive Fujitsu adag si ay u bilaabaan iskaanka, taas oo lagu baari doono oo ku qoran interface barnaamijka.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad drive Fujitsu adag oo la aqoonsan karo sida drive adag on your computer.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga Fujitsu Hard Drive
Xogtaada badiyay lagu soo bandhigi doonaa qaybaha sida "Graphic", "Video", "Document", iwm sawirka kadib. Waxaad ku hubin kartaa in aad files lumay la soo kabsaday karo ama aan ka magacyada asalka file. Waxaad sidoo kale ku eegaan karo helay images.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
> Resource > Hard Drive > Fujitsu Hard Drive Recovery Tutorial - Sida loo soo celiyo files lumay ka Fujitsu Ha